Ecclesiastes – 2hove
musha / Bhaibheri / Old Testament / Ecclesiastes
1:1 Mashoko Muparidzi, mwanakomana waDhavhidhi, mambo weJerusarema.
1:2 Ecclesiastes akati: Hazvina maturo! Hazvina maturo, uye zvose hazvina maturo!
1:3 Chiizve munhu kubva kwake kose, sezvo kwaanobata pasi pezuva?
1:4 Chizvarwa paichapfuura, uye chizvarwa anosvika. Asi nyika anomira nokusingaperi.
1:5 Zuva rinobuda uye anogadza; izvozvo anodzokera panzvimbo yayo, uye kubva ipapo, patsva,
1:6 izvozvo unotenderera kuburikidza rwezasi, uye arcs kurutivi rwokumusoro. Mweya anoenderera mberi, richivhenekera zvose mudunhu raro, uye akatendeuka zvakare yaro kutenderera.
1:7 nzizi dzose kupinda mugungwa, uye gungwa anoita hadzingakunyudzi. Kunzvimbo iyo kuenda nzizi kunze, vanodzokera, kuti zvibudire zvakare.
1:8 Zvinhu zvakadai vanonetsa; murume haasi kukwanisa kutsanangura nemashoko. The Ziso harigutswi nokuona, kana nzeve kuzadziswa nekunzwa.
1:9 Chii chakavapo? The chete anofanira kurarama munguva yemberi. Chii chakaitwa? The chete anofanira kuramba kuitwa.
1:10 Hapana chitsva pasi pezuva. Kana munhu anokwanisa kutaura: "Tarirai, ichi chitsva!"Nokuti vakauya kare anobuda mumazera vakanga pamberi pedu.
1:11 Hakuna achazotevera zvinhu. chaizvo, hakungavi chero zvinyorwa zvekare zvinhu mune ramangwana, avo ruchavapo pakuguma chaipo.
1:12 ini, Ecclesiastes, aiva mambo weIsraeri paJerusarema.
1:13 Uye ndakanga ndakatsunga mupfungwa dzangu kuzotsvaka kuongorora nokuchenjera, pamusoro pezvose zvinoitwa pasi pezuva. Mwari akapa iri rakaoma chaizvo vanakomana vavanhu, saka kuti kubatikana nazvo.
1:14 Ndakaona zvose zvinoitwa pasi pezuva, uye tarira: zvose zviri maturo uye kutambudzika kwomudzimu.
1:15 Mutsauki havadi kururamiswa, uye nhamba benzi zhinji.
1:16 Ndakataura mumwoyo mangu, vachiti: "Tarirai, I hwapedza ukuru, uye ini Munopfuura akachenjera vakanditangira paJerusaremu. "Uye pfungwa wangu kufunga zvinhu zvizhinji nouchenjeri zvose, uye ndakadzidza.
1:17 Ini vakatsaurira mwoyo wangu, I kuitira kuti muzive uchenjeri uye nedzidziso, uyewo kukutadza uye upenzi. Asi ini kuziva kuti, pazvinhu izvi uyewo, pane dambudziko, uye kutambudzika kwomudzimu.
1:18 Nokuda kwaizvozvi, nouchenjeri zvikuru panewo hasha zvikuru. Uye ani naani anowedzera zivo, uyewo inowedzera dambudziko.
2:1 Ndakati mumoyo mangu: "Ini achabuda nokupararira pamwe pezvinofadza, uye ndichaita nezvinhu zvakanaka. "Zvino ndakaona kuti izvi, wo, ndiko pasina.
2:2 bvipfi, Ndikacherechedza chikanganiso. Uye vakafarira, ndati: "Nei iwe kunyengerwa, pasina?"
2:3 Ndakasarudza mumwoyo mangu kuti mubve nyama yangu newaini, saka kuti auye pfungwa dzangu kuti uchenjeri, uye kutsauka upenzi, kusvikira ndaona chii runobatsira vanakomana vavanhu, uye zvavanofanira kuita pasi pezuva, munguva mazuva oupenyu hwavo.
2:4 Ini akakudza mabasa angu. Ndakazvivakira dzimba pachangu, ndikasimamo yemizambiringa.
2:5 Ndakazviitira minda neminda yemiti. Ndikasimamo navo nemiti zvemarudzi ose.
2:6 Uye ini akacherawo fishponds mvura, saka kuti diridza sango miti kukura.
2:7 Ndakawana varume nevakadzi varanda, uye ndaiva mhuri huru, uyewo emombe namapoka makuru amakwai, mhiri vose vakanditangira paJerusaremu.
2:8 Ini vakaunganidza pachangu sirivha nendarama, uye pfuma pemadzimambo nemagavhuna. Ndakasarudza varume navakadzi vaimbi, and the delights of the sons of men, bowls and pitchers for the purpose of pouring wine.
2:12 I continued on, so as to contemplate wisdom, as well as error and foolishness. "Munhu chii,” I said, "Kuti aizokwanisa kutevedzera Muiti wake, mambo?"
2:13 Uye ndakaona kuti uchenjeri runopfuura upenzi, zvokuti ivo vakasiyana zvakawanda chiedza kubva parima.
2:14 Meso akachenjera ari mumusoro wake. Murume benzi rinofamba murima. Asi ndakadzidza kuti munhu achapfuura sedzimwe.
2:15 Ndakati mumoyo mangu: "Kana rufu nevasina mapenzi uye ndimene ndichava munhu, angabatsirwa nazvo sei ini, kana ndaisa pachangu zvakawanda kwazvo kuti basa uchenjeri?"Uye sezvo ndichitaura mukati yangu pfungwa, Ndikaona kuti ichi, wo, ndiko pasina.
2:16 Nokuti hapana kuva kurangarirwa nekusingaperi akachenjera, kana benzi. Uye ramangwana nguva achafukidzwa zvose pamwe chete, pamwe yokukanganwa. The vakadzidza uchafira nenzira yakafanana kuti kudzidza.
2:17 uye, nekuti izvi, hwangu upenyu wakandinetsa, sezvo ndakaona kuti zvose pasi pezuva zvakaipa, uye zvose zviri chinhu uye kutambudzika kwomudzimu.
2:18 zvakare, Ini vaivenga dzangu kuita zvose, nokuda kwandatambura nomwoyo wose kubata pasi pezuva, kuti dzakatorwa mugari wenhaka pashure pangu,
2:19 kwete kunyange ndinoziva kana iye achava akachenjera kana benzi. Asi achava anesimba pamusoro pamabasa angu, umo ndakakushandirai zvakaoma uye vaizvidya mwoyo. Uye kuti pane zvimwe zvikuru chinhu?
2:20 saka, I kurega, uye mwoyo wangu zvasiya nesimba mberi pasi pezuva.
2:21 Nokuti kana mumwe munhu akatambura hake nouchenjeri, uye nedzidziso, uye ungwaru, anobva shure zvaanenge aita munhu simbe. saka izvi, wo, ndiye maturo uye mutoro mukuru.
2:22 Nokuti sei munhu akabatsirwa kwake kose uye kutambudzika komweya, iro rave ndondo pasi pezuva?
2:23 Mazuva ake ose havana wazadzwa kusuwa uye nematambudziko; harigoni kuzorora pfungwa dzake, kunyange usiku. Uye ichi kwete zvisina maturo?
2:24 Hazvisi nani kudya nokunwa, uye kuratidza mweya wake zvakanaka zvinhu zvemabasa ake? Uye zvinobva paruoko rwaMwari.
2:25 Saka uyo uchadya nokupararira pamwe zvinofadza zvakawanda ndine?
2:26 Mwari akapa, munhu akanaka pamberi pake, njere, uye ruzivo, uye kufara. Asi mutadzi, akapa kutambudzika uye pasina vaitozonyepa muvanhu kuti seyi, kuti kuwedzera, uye kuungana, uye kuti anunure, kuna iye akafadza Mwari. asi ichi, wo, ndiye maturo uye negomba vaitozonyepa muvanhu kuti seyi pfungwa.
3:1 Zvinhu zvose zvine nguva yavo, uye zvinhu zvose pasi pedenga mberi munguva penguva yavo.
3:2 A nguva yokuberekwa, nenguva yokufa. Nguva yokusima, uye nenguva gondo chii wakasimwa.
3:3 A nguva yokuuraya, uye nenguva yokuporesa. A nguva yokuputsa, uye nenguva yokuvaka.
3:4 A nguva yokuchema, uye nenguva yokuseka. Nguva yokuungudza, uye nenguva yokupembera.
3:5 A nguva kumwaya mabwe, uye nenguva yokuunganidza. A nguva yokumbundira, uye nguva kuva kure kumbundirana.
3:6 A nguva yokuwana, uye nenguva yokurasikirwa. Nguva yokuchengeta, uye nguva yokurasha.
3:7 Nguva yokubvarura, uye nenguva yokusona. A nguva yokunyarara, uye nenguva yokutaura.
3:8 A nguva yorudo, uye nguva ruvengo. A nguva yehondo, uye nenguva yorugare.
3:9 Chiizve munhu ave napabasa rake?
3:10 Ndakaona kutambudzika kuti Mwari akapa vanakomana vevanhu, kuitira kuti varege kubatikana nazvo.
3:11 Akaita zvinhu zvose zvakanaka panguva yazvo, uye iye mumaoko munyika kusawirirana kwavo, kuti murume arege kuwana basa yakaitwa naMwari kubva pakutanga, kunyange kusvikira pakuguma.
3:12 Uye ndinoziva kuti hapana chinhu chiri nani pane kuti vafare, uye kuti vaite zvakanaka upenyu huno.
3:13 Nokuti ichi chipo chinobva kuna Mwari: kana mumwe munhu anodya nokunwa, uye anoona zvibereko zvebasa rake rakanaka.
3:14 Ndakadzidza kuti ose mabasa Mwari akaita mberi, nekusingaperi. Hatina kukwanisa kuwedzera chinhu, kana kuti kutora chimwe chinhu kubva, kubva zvinhu izvo Mwari akaita kuti iye anogona kutyiwa.
3:15 Chii chakaitwa, chete mberi. Chii chiri mberi, yakatobuda aripo. Uye Mwari pavezve chii kwapfuura kure.
3:16 Ndakaona pasi pezuva: pachinzvimbo mutongo, hanya nezvisina kururama, uye pachinzvimbo kururamisira, zvakaipa.
3:17 Ndakati mumoyo mangu: "Mwari achatonga akarurama uye vakaipa, uye zvadaro nguva yokuti nyaya imwe neimwe inofanira kuva. "
3:18 Ndakati mumoyo mangu, pamusoro pavanakomana vavanhu, kuti Mwari vaizoita kuvaedza, uye zvinoratidza kuti kufanana dzomusango.
3:19 Nechikonzero ichi, Nokufamba kure wemunhu uye nezvikara ndomumwe, uye mamiriro ezvinhu zvose akaenzana. Nokuti sezvo munhu akafa, saizvozvowo vanoita kufa. Zvinhu zvose fema saizvozvo, uye murume ane chinhu kupfuura mhuka; nokuti zvose izvi ndizvo pasi maturo.
3:20 Uye zvose zvinhu mberi panzvimbo imwe; nokuti kubva pasi vakanga vakaita, uye kusvikira pasi vachadzokera pamwechete.
3:21 Ndiani anoziva kana simba roupenyu revanakomana Adam kwira kumusoro, uye kana mweya wemhuka ngaaburuke pasi?
3:22 Uye ndaona nekutarisisa chinhu nani pane kuti munhu nokufarira basa rake: nokuti uyu ndiwo mugove wake. Uye ndiani anofanira kuwedzera kwaari, kuti muzive zvinhu zvichaitika pashure pake?
4:1 Ndakatendeuka pachangu vamwe zvinhu, uye ndakaona zvenhema izvo zvinoitwa pasi pezuva, uye misodzi mhosva, uye kuti hapana munhu vavanyaradze; uye kuti vakanga vasingagoni kumira kwavo mhirizhonga, kuva anoshayiwa rubatsiro zvose.
4:2 uye saka, Ndakati vakafa kupfuura vapenyu.
4:3 Uye kudarika zvose izvi, I kutongwa kuti, uyo asati aberekwa, uye iye asati aona pezvakaipa zvinoitwa pasi pezuva.
4:4 zvakare, Ndakanga nezvezvinoitwa pamabasa ose avanhu. Uye ini vakazvicherechedza kuti avo kuedza anosvinurira kuti godo muvakidzani wavo. uye saka, Muizvi, wo, pane maturo uye okushamisira kufunganya.
4:5 Nebenzi matanga maoko ake pamwe chete, uye iye unopisa nyama yake, vachiti:
4:6 "A tsama pamwe zororo iri nani pane maoko vose vakazadzwa pamabasa uye nokutambudzika kwemweya."
4:7 Kunyange kufunga izvi, I akazivawo imwe maturo pasi pezuva.
4:8 Ndiye mumwe, uye haana kechipiri: Havasi, hapana munin'ina. Asi harimiri basa, kana meso ake kugutsikana upfumi, uyewo kuratidza, vachiti: "Handiiti basa ani uye kubiridzira mweya wangu zvinhu zvakanaka?" Muizvi, wo, ndiye maturo uye zvikuru rinoremera dambudziko.
4:9 saka, zviri nani vaviri kuzova pamwe chete, pane munhu ave oga. Nokuti vane mukana ushamwari hwavo.
4:10 Kana munhu anowira, anofanira Anotsigirwa nemamwe. Nhamo munhu oga. Nokuti kana unowira, asina mumwe angamusimudza.
4:11 Uye kana vaviri vakarara, ivo inodziya mumwe. Sei mumwe munhu ari oga anofanira kudziyirwa?
4:12 Uye kana munhu anogona akavamba mumwe, vaviri vanogona vangamudzivisa, uye netambo wakuvadzwa yakaoma.
4:13 Zviri nani kuva mukomana, murombo uye akachenjera, pane mambo, mutana benzi, asingazive kutarira mberi nokuda kuvazukuru.
4:14 For dzimwe nguva, mumwe unobuda mujeri uye ngetani, kuti umambo, apo mumwe, akaberekerwa simba roumambo, inodyiwa vanoda.
4:15 Ndakaona vapenyu vose vanofamba pasi pezuva, uye ndakaona runotevera, vachamuka munzvimbo dzavo.
4:16 Nhamba yevanhu, kubva vose asati ava, ndiyo zhinji. Uye vaya ruchavapo mushure ngavarege kufara nazvo. asi ichi, wo, ndiyo maturo uye kutambudzika kwomudzimu.
4:17 Chengetedza rutsoka rwako, kana iwe vanozopinda mumba yaMwari, muswedere, kuti vateerere. Nokuti kuteerera kuri nani zvikuru pane zvibayiro wamapenzi, vasingazivi zvakaipa zvavari kuita.
5:1 Unofanira kutaura chinhu nokusarangarira, uyewo vanofanira moyo wako urege kukurumidza kuuya shoko pamberi paMwari. Nekuti Mwari ari kudenga, uye iwe uri panyika. Nechikonzero ichi, mashoko ako ngaave mashoma.
5:2 Dreams vanotevera pfungwa dzakawanda, uye nemashoko mazhinji upenzi vachawanikwa.
5:3 Kana apika chinhu Mwari, haufaniri kunonoka chokukuripa nacho. Uye zvose iwe apika, Uripe kuti. Asi vimbiso asina kutendeka uye mapenzi zvisingamufadzi.
5:4 Zviri nani zvikuru kuti arege kuita mhiko, pane, pashure mhiko, kwete kuzadzisa zvakanga zvavimbiswa.
5:5 Haufaniri kushandisa muromo wako kuti nyama yako kuchivi. Uye iwe unofanira kutaura, pamberi mutumwa, "Hakuna Providence." Nokuti Mwari, akatsamwa nemashoko ako, anogona uparadzire ose amaoko enyu.
5:6 Apo pane hope zhinji, pane zvakawanda zvisina maturo uye kuverengwa mashoko. Asi zvechokwadi, unofanira kutya Mwari.
5:7 Kana ukaona zvenhema murombo, uye chisimba nokutonga, uye wakatsauka kururamisira muhurumende, usashamisika pamusoro izvi. Nokuti vaya vari dzakakwirira vane vamwe vari yepamusorosoro, uye kuchine vamwe, zvimwe yokufeva, pamusoro izvi.
5:8 asi pakupedzisira, pane Mambo anotonga pamusoro penyika yose, chiri pasi pake.
5:9 A makaro murume havazobvumirwi inogutswa mari. Uye ani naani anoda pfuma achakohwa hapana zvibereko pauri. saka, ichi, wo, ndiko pasina.
5:10 Apo pane pfuma zhinji, ndipo pane vakawanda uchapedza izvi. Uye zvichabatsirei uyo ane, asi kuti anonzwisisa upfumi nemaziso ake?
5:11 Kurara hunozipa ndouya, kana unopisa zvishoma kana zvizhinji. Asi satiation mumwe mupfumi Haazobvumiri kurara.
5:12 Pane kunyange mumwe utera zvikuru inorema, chandakaona pasi pezuva: upfumi akaramba kuti kukuvadza ari muridzi.
5:13 Nokuti vakarasika zvokushamiswa chinoshungurudza dambudziko. Iye akabudisa mwanakomana, vanenge rokumavirazuva muurombo.
5:14 Sezvo akaenda kupfeka kubva padumbu ramai vake, saka anofanira kudzokera, uye anofanira kutora naye chinhu pamabasa ake.
5:15 Chinhu chose kunosiririsa utera kuti, saizvozvo sezvaakange yasvika, saka anofanira kudzokera. Zvino sei kubatsirwa naye, sezvo iye akashanda mhepo?
5:16 Mazuva ose oupenyu hwake iye unopisa: murima, uye mwoyo zhinji, uye kutambudzika uyewo kusuruvara.
5:17 uye saka, izvi zvakaonekwa zvakanaka kwandiri: kuti munhu adye uye anwe, uye vanofanira tifadzwe basa rake, umo iye zvakaoma pasi pezuva, nokuti mazuva ake upenyu kuti Mwari akamupa. Nokuti uyu ndiwo mugove wake.
5:18 Uye ichi ndicho chipo chinobva kuna Mwari: kuti mumwe nomumwe anopiwa naMwari fuma uye zviwanikwa, uye uyo akapa kukwanisa upise izvi, Ungafara mugove wake, uye vanogona kuwana mufaro pamabasa ake.
5:19 Uye achabva kwete zvakazara kurangarira mazuva hwake, nekuti Mwari anopindura mwoyo wake pezvinofadza.
6:1 Panewo imwe zvakaipa, chandakaona pasi pezuva, uye, chaizvo, rinogara pakati pavanhu.
6:2 Zviri munhu anopiwa naMwari fuma, uye pfuma, uye rukudzo; uye kubva zvose kuti anoda, hapana ari kushaiwa hwake; asi Mwari haadi mumuwanise mano upise izvi, asi pachinzvimbo munhu ari mweni uchavapedza. Ichi maturo uye chinhu chakaipa kwazvo.
6:3 Kana murume vaifanira kubereka vana zana, uye kurarama kwemakore akawanda, uye kuwana zera mazuva mazhinji, uye kana mweya wake vaifanira kuita kushandisa nhumbi pfuma yake, uye kana vakanga vasina kunyange kuvigwa: pamusoro munhu akadaro, Ndinoparidza kuti mwana kusvodza anopfuura iye.
6:4 Nokuti iye anosvika pasina chinangwa uye anoramba ari murima, uye zita rake richava zvidzimwe kure, kupinda yokukanganwa.
6:5 Haana kuona zuva, kana akaona musiyano pakati pezvakanaka nezvakaipa.
6:6 Kunyange aiva kuraramira zviuru zviviri zvemakore, asi kwete Nyatsonakidzwa zvakanaka, asingadi mumwe nomumwe kukurumidza kusvika kunzvimbo imwe chete?
6:7 Mumwe Kubata komunhu kunoitirwa muromo wake, asi mweya wake haangavi achazadzwa.
6:8 Ko akachenjera riri kupfuura benzi? Uye chii pauper vane, kunze mberi panzvimbo iyoyo, pane upenyu?
6:9 Zviri nani kuona zvamunoda, pane kuda chii haugoni kuziva. asi ichi, wo, ndiye maturo uye fungidziro kwomudzimu.
6:10 Ani naani mune ramangwana, zita rake kare anonzi. Uye zvinozivikanwa kuti ndiye murume uye kuti iye haana kukwanisa achikwikwidza rokutonga uyo akasimba kumupfuura.
6:11 Kune mashoko akawanda, uye vazhinji izvi, mune kusawirirana, bata zvisina maturo zvizhinji.
7:1 Nei zvichikosha kuti munhu kuzotsvaka zvinhu kupfuura pachake vari, kana iye haazivi zvinobatsira pachake muupenyu hwake, munguva mazuva ake vatorwa, uye apo nguva uchipfuura somumvuri? Kana ndiani achakwanisa kumuudza chii chichava mune ramangwana vanomutevera pasi pezuva?
7:2 Zita rakanaka riri nani pane zvinokosha nezvizoro, uye zuva rokufa riri nani pane zuva rokuberekwa.
7:3 Zviri nani kuenda kuimba yokuchema, pane imwe imba yamabiko. Nokuti yaimbova, tinokurudzirwa pamusoro mugumo zvose, saka kuti vapenyu funga chii chingava mune ramangwana.
7:4 Hasha kunopfuura kuseka. Nokuti kubudikidza unofadzwa nokupunyaira kwechiso, mweya uyo anogumbura anogona kugadziriswa.
7:5 Mwoyo womunhu akachenjera inzvimbo yokuchema, uye moyo yamapenzi inzvimbo rokufara.
7:6 Zviri nani kuti kururamiswa munhu akachenjera, pane kuti kunyengedzwa nokuda rumbidzo kwenhema wamapenzi.
7:7 For, kufanana kwomurazvo minzwa kutsva pasi pehari, ndizvo kuseka mapenzi. asi ichi, wo, ndiko pasina.
7:8 A zvenhema anotambudza murume akachenjera uye saps simba mwoyo wake.
7:9 Kuguma kutaura kunopfuura kutanga. Patience kunopfuura nokuzvikudza.
7:10 Regai kukurumidza kuzununguswa kutsamwa. Nokuti kutsamwa kunogara marunda wamapenzi.
7:11 Haufaniri kutaura: "Munofunga kuti chikonzero kuti yekare zvaiva nani kupfuura ivo ikozvino?"Nokuti rudzi mubvunzo upenzi.
7:12 Uchenjeri nepfuma zviri zvikuru uye zvakawanda zvinobatsira, vaya vanoona zuva.
7:13 Nokuti uchenjeri hunodzivirira, saizvozvowo anoita mari kudzivirira. Asi kudzidza uye uchenjeri izvi zvakawanda: kuti ape upenyu munhu ane wavo.
7:14 Funga mabasa aMwari, kuti hakuna munhu anokwanisa kugadzirisa waanoda azvidza.
7:15 Munguva dzakanaka, nezvinhu zvakanaka, asi ngwarirai nguva yakaipa. Nokuti sezvo Mwari ane chigaro mumwe, saizvozvowo mumwe, in order that man may not find any just complaint against him.
7:19 It is good for you to support a just man. Uyezve, you should not withdraw your hand from him, for whoever fears God, neglects nothing.
7:22 Naizvozvo, do not attach your heart to every word that is spoken, lest perhaps you may hear your servant speaking ill of you.
7:23 Nokuti hana yako anoziva kuti iwe, wo, vakaramba vakataura zvakaipa vamwe.
7:24 Ndakazviedza zvose nouchenjeri. Ndakati: "Ini ndichava akachenjera." Asi uchenjeri akabva kure neni,
7:25 zvikuru kupfuura zvayaive kare. Uchenjeri chakadzama zvikuru, saka ndiani uchakuratidzai naye?
7:26 Ndanyatsomuongorora zvose zviri mweya wangu, kuti ndizive, uye funga, uye nditsvake uchenjeri uye chikonzero, uye kuitira kuti vazive hanya nezvisina kururama wamapenzi, uye kukanganisa munhu asina kungwara.
7:27 Uye ini vakaona mukadzi chinovava kukunda rufu: iye akafanana musungo muvhimi, uye vane mwoyo hwakafananawo nemumbure, uye vane maoko vakafanana ngetani. Uyo anofadza Mwari rwuchavatiza kwaari. Asi ani naani mutadzi uchatorwa naye.
7:28 tarirai, Ecclesiastes akati, Ndaona nekutarisisa izvi, mumwe pashure perimwe, kuitira kuti kuwana tsananguro
7:29 izvo zvichitsvakwa nomweya wangu uye haana kuwanikwa. murume mumwe pakati pechiuru chezana, Ndawana; mumwe mukadzi pakati pavo vose, Handina kuwana.
7:30 Izvi chete vane ndakaona: kuti Mwari akaita munhu akarurama, asi iye kushatiswa pachake mibvunzo wandisa. Ndiani mukuru sezvo akachenjera? Uye ndiani kunzwisisa zvinoreva shoko?
8:1 Uchenjeri munhu chinovhenekera chiso chake, uye kunyange kutaura murume ane simba kupfuura zvichachinja.
8:2 I kuteerera muromo wamambo, uye murairo mhiko kuna Mwari.
8:3 Haufaniri kukurumidza abve pamberi pake, kana uchifanira kuramba pebasa rakaipa. Nokuti zvose inomufadza, achazviita.
8:4 Uye shoko rake uzere simba. Uyewo munhu anogona kutaura kuti iye: "Ko, muri kuitirei izvi nenzira?"
8:5 Munhu anochengeta murayiro haangavi kuona zvakaipa. Mwoyo wowakachenjera anonzwisisa nguva kupindura.
8:6 Pamhaka dzose, pane nguva uye mukana, uyewo matambudziko akawanda, munhu.
8:7 Nokuti iye ndiye vasingazivi kare, uye anokwanisa kuziva chinhu ramangwana achishandisa nhume.
8:8 Harisi musimba munhu rambidza mweya, uyewo haana simba pamusoro pezuva rorufu, kana akabvumira kuzorora kana hondo ikamuka, uye kana hanya nezvisina kururama kuponesa pavatadzi.
8:9 Ndakati zvose izvi, uye ini nomoyo wangu mabasa ose ayo ari kuitwa pasi pezuva. Dzimwe nguva mumwe murume anotonga mumwe achimukuvadza pachake.
8:10 Ndakaona akaipa achivigwa. ivava, pavakanga vachiri vapenyu, vaiva munzvimbo tsvene, uye vakanga vakarumbidza muguta sezvo vashandi kururamisira. asi ichi, wo, ndiko pasina.
8:11 Nokuti vanakomana vevanhu vanotochiita zvakaipa pasina kutya, nekuti kutonga haina kwakaziviswa nokukurumidza kundorwa zvakaipa.
8:12 Asi kunyange mutadzi anogona kuita zvakaipa pachake zvinezana, uye nokutsungirira zvichiri kutsungirira, I kuti zvichava zvakanaka vaya vanotya Mwari, uyo tsaurai chiso chake.
8:13 saka, Dai zvakanaka akaipa, uye dai mazuva ake haangawedzerwi. Uye vaya musatya chiso chaIshe zvichipfuura somumvuri.
8:14 Panewo imwe maturo, kunoitwa panyika. Kune wakarurama, vakanzi zvakaipa zviitike, sezvinonzi vaita mabasa akaipa. Uye pane vakaipa, vari yakachengeteka chaizvo, sokunge nhaka mabasa akarurama. asi ichi, wo, I kutonga kuva kwazvo maturo.
8:15 uye saka, Ndarumbidza vachifara, nekuti kwakanga kusina chakanaka munhu pasi pezuva, kunze kudya nokunwa, uye kuti anopa, uye nekuti iye kutora chinhu naye napabasa rake mumazuva hwake, Mwari akapa kwaari pasi pezuva.
8:16 Ndikarwadza moyo wangu, saka kuti ndizive uchenjeri, uye kuti ini vanzwisise nyonganyonga kuti anotendeuka panyika: ndiwo munhu, Anogamuchira hapana hope nemaziso ake, masikati nousiku.
8:17 Uye ndainzwisisa kuti munhu anokwanisa kuwana tsananguro vose avo mabasa aMwari ayo anoitwa pasi pezuva. uye saka, zvikuru kuti kwaanobata kutsvaka, saka zvikuru muduku anonowanei. Ehe, kunyange kana munhu akachenjera vaifanira kunomhangara kuti anoziva, haana kukwanisa kuona nayo.
9:1 I vanovhomora zvose izvi kuburikidza mwoyo wangu, saka kuti ndive nokungwarira kunzwisisa. Kune chete varume uyewo vakachenjera, uye mabasa avo vari muruoko rwaMwari. Asi munhu haazivi kunyange kana akakodzera rudo kana ruvengo.
9:2 Asi zvinhu zvose mune ramangwana kuramba hakunyatsozivikanwi, nekuti zvinhu zvose zviitike zvakafanana akarurama uye kune vakaipa, kune zvakanaka uye zvakaipa, kune wakachena uye kuti chakaipa, kune avo zvibayiro uye kune vaya vanozvidza zvibayiro. Sezvo dzakanaka, saizvozvowo vatadzi. Sezvo vaya vanoita nhema vari, saka vaya vanopika kuti chokwadi.
9:3 Iyi mutoro mukuru pakati zvose zvinoitwa pasi pezuva: kuti zvinhu zvimwechetezvo zvinoitika kumunhu wose. Zvino moyo yavanakomana vavanhu izere utsinye uye kuzvidza muupenyu hwavo, pashure ivo vachanzi vakakakatira mugehena.
9:4 Hakuna munhu anogara nokusingaperi, kana ndiani kunyange ane chivimbo panyaya iyi. Imbwa mhenyu iri nani pane shumba yakafa.
9:5 Nokuti vapenyu vanoziva kuti ivo pachavo vachazofa, asi zvirokwazvo vakafa havana chavanoziva zvakare, uyewo vane chero zvakafanira. Nokuti ndangariro yadzo inokanganikwa.
9:6 zvakafanana, rudo uye kuvengana uye negodo vose vakaparara pamwe, havana nzvimbo ino uye basa rinoitwa pasi pezuva.
9:7 Naizvozvo, enda udye zvokudya zvako nomufaro, uye waini yako nomufaro. Nokuti mabasa enyu zvinofadza Mwari.
9:8 Nguvo dzako chena nguva dzose, uye ngaarege mafuta kusava kubva musoro wako.
9:9 Fadzwa noupenyu nomudzimai waunoda, mazuva ose isingagari upenyu hwako zvakapiwa kwamuri pasi pezuva, munguva dzose nguva maturo yako. Nekuti ndiwo mugove wako paupenyu, uye pakubata kwako, rwamakandida pasi pezuva.
9:10 Zvose zvinowana ruoko rwako anogona kuita, kuzviita nomwoyo wose. Nekuti basa, kana chikonzero, kana uchenjeri, kana ruzivo ruchavapo murufu, vakatarira yauri akakurumidza.
9:11 Ndakatendeuka pachangu kune chimwe chinhu, uye ndakaona kuti pasi pezuva, nhangemutange haisi kune anomhanyisa, kana hondo kune simba, kana chingwa akachenjera, kana upfumi kune vakadzidza, kana nyasha kuna romubati: asi pane imwe nguva uye kuguma zvose izvi.
9:12 Man haazivi magumo ake. asi, sezvinoita hove vanobatwa nechiredzo, uye shiri dziri akabatwa aine musungo, saka varume vakabata rakaipa nguva, kana achangoerekana richandifukidza navo.
9:13 uchenjeri uku, zvakafanana, Chandakaona pasi pezuva, uye Ndanyatsomuongorora izvozvo kwazvo.
9:14 Paiva guta duku, ane varume vashoma mariri. Kwakauya kuzorwa naro mambo mukuru, uyo azoona, uye akavaka masvingo ose akaripoteredza, uye blockade yakapera.
9:15 Uye makawanikwa mukati maro, munhu murombo uye akachenjera, iye akasunungura guta nouchenjeri hwake, uye hapana hwakanyorwa pashure kuti murombo.
9:16 uye saka, I akazivisa kuti uchenjeri hunopfuura simba. Asi sei, ndokubva, kuti uchenjeri Murombo chinozvidzwa, uye mashoko ake haangateererwi?
9:17 Mashoko avakachenjera, anonzwika kana runyararo, kupfuura kuchema muchinda pakati mapenzi.
9:18 Uchenjeri hunopfuura nhumbi dzokurwa. Uye ani naani anogumbura mumwe chinhu, unorashikirwa zvinhu zvakanaka zvakawanda.
10:1 Kufa nhunzi kukanganisa kutapira kwemafuta. Uchenjeri uye kubwinya rinokosha kupfuura pfupi uye shoma upenzi.
10:2 Mwoyo wowakachenjera ari rwake rworudyi, uye moyo benzi riri muruoko rwake rworuboshwe.
10:3 Uyezve, sezvo benzi iri uchifamba munzira, even though he himself is unwise, he considers everyone to be foolish.
10:16 Mune nhamo imi, the land whose king is a boy, and whose princes consume in the morning.
11:1 Cast your bread over running waters. For, pashure refu, you shall find it again.
11:8 If a man lives for many years, and if he has rejoiced in all of these, he must remember the many days of the dark times, izvo, when they will have arrived, will accuse the past of vanity.
11:9 Naizvozvo, farai, O young man, in your youth, and let your heart remain in what is good during the days of your youth. And walk in the ways of your heart, and with the perception of your eyes. And know that, concerning all these things, God will bring you to judgment.
12:2 Before the sun, and the light, uye mwedzi, and the stars are darkened and the clouds return after the rain,
12:5 zvakafanana, they will fear the things above them, and they will dread the way. The almond tree will flourish; the locust will be fattened; and the caper plant will scattered, because man shall go into the house of his eternity, and the mourners shall wander around in the street.
12:8 Hazvina maturo, said Ecclesiastes, uye zvose hazvina maturo!
12:11 The words of the wise are like a goad, and like nails deeply fastened, izvo, through the counsel of teachers, are set forth by one pastor.
12:12 You should require no more than this, Mwanakomana wangu. For there is no end to the making of many books. And excessive study is an affliction to the flesh.
12:14 uye saka, for all that is done and for each error, God will bring judgment: whether it was good or evil.